ဒိန်းမတ်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်အခမဲ့ပညာရေး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပုံရိပ်တွေ: Boris Georgiev
Boris Georgiev 26 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတစ်ဦးပြင်ဆင်နေသည် ဒေါက်တာဘွဲ့ Aarhus တက္ကသိုလ်မှဘောဂဗေဒ၌တည်၏။ သူ့အချိန်သုတေသနအတွက်ဖြတ်သန်း, ဒါပေမယ့်သူကတက်တက်ကြွကြွအားကစားလုပ်နေတာချစ်သောသူအချို့သောအားလပ်ချိန်ရှိပါတယ်အခါ။
ပထမဦးစွာငါဆီသို့ရောက် လာ. , ဒိန္းမတ္ ကျောင်းစီမံကိန်းကိုအတူ။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအထင်အမြင်သည်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့အလွန်ဖော်ရွေခြင်းနှင့်မျိုးဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ Svendborg များ၏အထက်တန်းကျောင်းအားလုံးနီးပါးအချိန်ကိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ငါအခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးကြောင်းသတိပြုမိနှင့်ကျောင်းသားများကိုအလွန်ခေတ်မီနည်းပညာပစ္စည်းကိရိယာများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ကျောင်းကအခြေခံအဆောက်အဦအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ် - ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ, အပြန်အလှန်စနစ်များစသည်တို့ကိုဒိန်းမတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းအလွန်ဖော်ရွေများနှင့်စေတနာစိတ်ရှိကြ၏။ တစ်နည်းနည်းနဲ့, ဒိန်းမတ်အတွက်အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်, ငါအမှုအရာသည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ရှုနေသောခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်မှငါ့တွေ့ကြုံအပြုသဘောခဲ့ကြသည်နဲ့ကျွန်မလျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါဘောဂဗေဒနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလေ့လာချင်တယ်။ ငါတက္ကသိုလ်များနှင့်အထူးများအတွက်သုတေသနပြုလေ၏။ ငါ Aarhus တက္ကသိုလ်မှမှာအထူးအကြောင်းကိုပိုမိုထွက်တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမွနျး: အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်လော
ကျွန်မကအရမ်းပွင့်လင်းအလားအလာနှင့်အတူကဒီမှာရောက်လေ၏။ ငါကလူဤလူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးစွာမျှော်လင့်ချက်သို့မဟုတ်စွဲစရာမလိုဘဲ, ဒီမှာနထေိုငျပုံကိုသိရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ငါအမြဲဒိန်းမတ်ကနေအကောင်းဆုံးယူဆန်သောကြောင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ငါကလူ communicate နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့အားလပ်ချိန်များတွင်အဘယ်သို့သောကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, လူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ features တွေအာရုံစိုက်။ ထိုအခါငါအများကြီးဥရောပနိုင်ငံတွေက Dane ကနေသင်ယူဖို့အများကြီးရှိသည်ထင်ပါတယ်။
ဘောဂဗေဒနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဘွဲ့ဘွဲ့ရပြီးနောက်ကျနော်ပြီးသားသုံးနှစ်ကဤနေရာတွင်အသက်ရှင်မျှမျှတတကောင်းစွာစနစ်သိတယ်ခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏ account ကိုဖန်တီးသက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရှိရာတက္ကသိုလ် site တစ်ခုရှိပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကအားလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ထားရန် 30 မိနစ်အကြောင်းကိုငါ့ကိုယူနိုင်အောင်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုလိုအပ်ပါသည်အထူးပြုနှင့်ဘွဲ့၏အဆင့်တစ်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သခင်၏အစီအစဉ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအနည်းငယ်ဗိုလ်ကြီးကောက်ယူငါသခင်၏ဘွဲ့များအတွက်စာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာလျှောက်ထားမှုအတွက်လွယ်ကူစေသည်ဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးစနစ်တကျစနစ်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်လျှောက်ထားအတည်ပြုခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်ပြန်ကြားချက်နှစ်လအတွင်းရောက်ရှိလာသည်။
ဒါဟာဒိန်းမတ်အပါအဝင်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးသောနေရာများ, အတွင်းမကြာခဏအာရုံစူးစိုက်နဲ့ Hard အလုပ်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဆုခခြဲ့သောအချက်ကိုပါပဲ။ ငါကဒီမှာနေထိုင်နေခဲ့တာရှစ်နှစ်၏ကာလအဘို့ငါတဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့အရာလေ့လာသင်ယူသည်သင်တို့အားရည်ရွယ်ချက်နှင့်စေ့စေ့အလုပ်လုပ်လျှင်သင်တို့ရှေ့မှဖွင့်လှစ်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းများ, အမှုအရာဖြစ်ပျက်ကိုလိုက်ကြောင်းရဲ့စဉ်းစားပါ။ ဤတွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတဦးတည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနိမ့်ရာထူးကနေကြွလာဆိုလိုသည်မှာလျှင်ပင်, ဒီအခမဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးလေးလည်းသူတို့လိုခငျြသမြှကိုဖြစ်လာမှသူတို့ကိုတားဆီးပါဘူး, အလွန်သာတူညီမျှပါပဲ။
ဤနေရာတွင်စနစ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးအခမဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသူတို့ပိုက်ဆံထိုသို့သို့မဟုတ်ရှိသည်မဟုတ်ဖြစ်စေ, သူတို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဘူး။ ဤသည်လူမှုရေး mobility အားပေးအားမြှောက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲတဦးတည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်သောအတွေ့အကြုံများကသိလာတယ်။ ငါကအသေးအဖွဲအသံမှန်း, ဒါပေမယ့်အချို့ကိုသင်ခဲယဉ်းအလုပ်ကိုနှင့်အလုပ်၏ရလဒ်များကိုမြင်သောအခါ, ထိုတဦးတည်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ: ဟုတ်ကဲ့, အမှုအရာဖွစျနိုငျ! တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ဘီး spinning စတင်အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုပ် system ပေါ်တွင် အခြေခံ. သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဤရွေ့ကားငါကဒီမှာကုန်ရသောအချိန်ကနေလေ့လာသင်ယူအဓိကသင်ခန်းစာများဖြစ်ကြသည်။
Boris Georgiev, ဒိန္းမတ္, Diyan Rusev, ဒေါက်တာဘွဲ့, ဘောဂဗေဒ, ပညာရေး, လူ | 22-02-2017 | rating:5/ 30